Madaxweyne Sarı Arifiye Karasu wuxuu Ankara weydiistay Taageero Tareenka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaMadaxweyne Sarı Arifiye Karasu wuxuu weydiisanayaa Taageerada Ankara ee Tareenka
11 / 12 / 2019 54 Sakarya, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Duqa Magaalada Karasu İshak Sarı, intii lagu guda jiray booqashadiisa Ankara Arifiye Karasu wuxuu weydiistay taageero xagga tareenka. Duqa Sarı wuxuu kaloo la kulmay daraasado isbadal magaalo
Duqa magaalada Karasu İshak Sarı wuxuu sii waday booqashadiisa Ankara isaga oo aan wax dib u dhac ah ku jirin wuxuuna weheliyey kuxigeenka duqa magaalada Hilmi Erbatan. Yalçın wuxuu la kulmay Eyigün. Intii kulanku socday, Dhismaha Wadada Karasu, heerka dib-u-dhicii ku yimid dib-u-dhac, waqtigii gaadiidka iyo arrimaha kaabayaasha ee degmada ayaa laga wada hadlay guud ahaan.
“Wadada tareenka waxaa la dhigay Mas
Madaxweyne İshak Sarı wuxuu sii waday booqashadiisa Ankara isaga iyo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Intii kulanku socday, ayaa laga wada hadlay arrimaha gaadiidka iyo kaabayaasha Kaabayaasha. Mawduuca muhiimka ah ee kulanka ayaa ahaa khadka tareenka ee Karasu Arifiye, kaas oo dhismihiisu bilaabmay laakiin aan lagu dhamayn karin sababao kala duwan awgood. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Guud ee Kaabayaasha Yalçın Eyigün wuxuu la kulmay Madaxweynaha İshak Sarı, Yalçın Eyigün wuxuu siiyay warbixin ku saabsan mashruucyada quseeya Karasu wuxuuna codsaday taageero gaar ahaan mashruuca tareenka ee loogu tala galay in lagu kasbado degmada.
Sıcak Xiriirkeena diirran ee Ankara waa sii soconayaa, Kar wuxuu yiri Duqa Magaalada Karasu İshak Sarı, “Waxaan sameyneynaa dadaal badan si aan u fulinno rabitaanka shacabkeena”. Madaxweyne Sarı wuxuu soo saaray bayaan ku saabsan wadahadalada Ankara; Booqashooyinka aan ku tagnay Ankara way sii soconayaan. Maanta, kuxigeenka Duqa Magaalada Hilmi Erbatan oo uu weheliyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Guud ee Kaabayaasha. Waxaan abaabushay booqasho Yalçın Eyigün. Waxaan soo bandhignay faylka mashruuca ee loo diyaariyey gaadiidkeena degmada waxaanna weydiisanay taageeradooda khadka tareenka kaasoo aan ku dhameysan dhibaatooyin kala duwan awgood. Waxaan aaminsanahay inaan qaadnay talaabo muhiim ah degmaddeena. Waxaan ku shaqeyn doonnaa daalnaan ilaa aan ka helno Karasu illaa heer ay mudan tahay. Gaadiidka, waxbarashada, dalxiiska, shaqada iyo kaabayaasha dhaqaalaha, inbadan oo kamid ah mashaariicdayada ayaa mid mid loo hirgalin doonaa, horumar iyo isbadal deg deg ah ayaa goob joog u noqon doona qof walba. ”
Duqa magaalada Tarsus ayaa codsan kara taageerada tareenka xawaaraha sare
Karaosmanoglu wuxuu weydiistay madaxweynaha taageerada mashruuca Metro
Khadkii Tareenka ee Karasu Arifiye
Dawlada Hoose ee Karasu
Wadada Tareenka Karasu